Hacho Calculator. Chakawedzera, Tikabvisa, vachiwedzera, kupatsanura zvikamu zviduku.
Chakapatsanurwa Calculator anogona overenga pamasvomhu kuvhiyiwa vane zvikamu zviduku uye zvakavhenganiswa nhamba, akadai achiwedzera, Tikabvisa, vachiwedzera, Tikabvisa uye nokuderedza zvikamu zviduku.
Nokuti pakuverenga Muchidimbu, kubvisa, muwande uye chakaparadzanisa zvikamu zviduku zveropa mbiri, kupinda numerator, dhinomineta, integer chikamu hacho, uye sarudza oparesheni kubva pachikwata. Pindai kunaka chiratidzo integer chikamu hacho, kana zvichidiwa.
Grade zvikamu zviduku Calculator
Kutendeuka grade nhamba kuti chikamu chiduku uye chikamu chiduku kuti grade nhamba
Quadratic mukana wokuti vanhu vanga solver Calculator
Kugadzirisa chero quadratic mukana wokuti vanhu vanga, kuwana discriminant uye zvose nemidzi mukana wokuti vanhu vanga.
Binary nhamba Calculator
Kuita pamasvomhu akavhiyiwa: chokuwanziridza, nokupesana, Uyezve, kubvisa, zvinonzwisisika UYE, zvinonzwisisika OR, modulo 2, pamwe binary nhamba
Operations pamusoro nhamba uye zvikamu zviduku, zvakadai Uyezve, kubvisa, chokuwanziridza, nokupesana, Sine, cosine, tangen, logarithm, exponential, masimba, zvinofarirwa, radians, inegumi.